ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): June 2010
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:47 AM0comments Links to this post
သစ်တုံးတရားတော် (၆) ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ် (ဗန်းမော် ဆရာတော်)
ကျေးဇူးတော်ရှင် (န၀မ) ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး
Labels: Bamaw Sayadaw, Dhamma Talks (Audio), ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ်
(၁-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ပြာသိုလဆန်း ၁၃ရက်ည)
(၂-၁-၁၉၇၇)-(၁၃၃၈ ပြာသိုလဆန်း ၁၄ရက်ည)
Labels: Dhamma Talks (Audio), U Nyanissara, ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ်
၁၈-၄-၁၉၉၃ (ညနေ) တွင် ဟောကြားတော်မူသော
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:05 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Video), U Gawsita, ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ်
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:08 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 5:18 AM 1 comments Links to this post
၂၄၁။ အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောသမ္ဗီပြည် ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းနား၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ဂင်္ဂါမြစ်ရေအယဉ်ဖြင့် မျော၍ လာသော ကြီးစွာသော သစ်တုံးကို မြင်တော်မူသော် ''ရဟန်းတို့ဂင်္ဂါမြစ်ရေအလျဉ်ဖြင့် မျော၍ လာသော ကြီးစွာသော သစ်တုံးကို သင်တို့မြင်ကြကုန်၏လော''ဟု ရဟန်းတို့ ကို မိန့် တော်မူ၏။ အသျှင်ဘုရား မြင်ကြပါကုန်၏။
ရဟန်းတို့အကယ်၍ သစ်တုံးသည် ဤမှာဘက်ကမ်းသို့မရောက်ခဲ့ပါလျှင်၊ ထိုမှာဘက်ကမ်းသို့ မရောက်ခဲ့ပါလျှင်၊ အလယ်၌ မနစ်မြုပ်ခဲ့ပါလျှင်၊ ကြည်းကုန်း၌ မတင်ခဲ့ပါလျှင်၊ လူတို့မဆယ်ယူခဲ့ပါလျှင်၊ နတ်တို့မဆယ်ယူခဲ့ပါလျှင်၊ ဝဲမစုပ်ယူခဲ့ပါလျှင်၊ အတွင်း၌ မဆွေးမပုပ်ခဲ့ပါလျှင် ထိုသစ်တုံးသည် သမုဒ္ဒရာသို့ညွတ်သည် သမုဒ္ဒရာသို့ကိုင်းသည် သမုဒ္ဒရာသို့ရှိုင်းသည် ဖြစ်လတ္တံ့ ။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ ရဟန်းတို့ဂင်္ဂါမြစ်၏ ရေအလျဉ်သည် သမုဒ္ဒရာသို့ညွတ်သည် သမုဒ္ဒရာသို့ကိုင်းသည်သမုဒ္ဒရာသို့ရှိုင်းသည် ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
ရဟန်းတို့ဤအတူ သင်တို့ သည်လည်း ဤမှာဘက်ကမ်းသို့မရောက်ခဲ့ပါလျှင်၊ ထိုမှာဘက်ကမ်းသို့ မကပ်ရောက်ကြပါလျှင်၊ အလယ်၌ မနစ်မြုပ်ကြပါလျှင်၊ ကြည်းကုန်း၌ မတင်ကြပါလျှင်၊ လူတို့မဆယ်ယူကြပါလျှင်၊ နတ်တို့မဆယ်ယူကြပါလျှင်၊ ဝဲမစုပ်ယူကြပါလျှင်၊ အတွင်း၌ မဆွေးမပုပ်ကြပါလျှင် သင်တို့ သည် နိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်ကုန်သည် နိဗ္ဗာန်သို့ကိုင်းကုန်သည် နိဗ္ဗာန်သို့ရှိုင်းကုန်သည် ဖြစ်လတ္တံ့ ။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ ရဟန်းတို့ကောင်းစွာ မြင်ခြင်း 'သမ္မာဒိဋ္ဌိ'သည် နိဗ္ဗာန်သို့ ညွတ်သည် နိဗ္ဗာန်သို့ကိုင်းသည် နိဗ္ဗာန်သို့ရှိုင်းသည် ဖြစ်သောကြောင့်တည်း။
ဤသို့မိန့် တော်မူလျှင် ရဟန်းတစ်ပါးသည် မြတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကို လျှောက်၏-''မြတ်စွာ့ဘုရား ဤမှာဘက်ကမ်းဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ ထိုမှာဘက်ကမ်းဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ အလယ်၌ နစ်မြုပ်ခြင်းဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ ကြည်းကုန်း၌ တင်မှုဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ လူတို့ဆယ်ယူမှုဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ နတ်တို့ဆယ်ယူမှုဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ ဝဲစုပ်ယူမှုဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ အတွင်း၌ ပုပ်ဆွေးမှုဟူသည် အဘယ်ပါနည်း ''ဟု (လျှောက်၏)။
ရဟန်း ''ဤမှာဘက်ကမ်း'' ဟူသော ဤအမည်သည် အတွင်းဖြစ်သော တည်ရာ 'အဇ္ဈတ္တိကာယတန'ခြောက်ပါးတို့ ၏ အမည်တည်း။ ရဟန်း ''ထိုမှာဘက်ကမ်း'' ဟူသော ဤအမည်သည်အပဖြစ်သောတည်ရာ 'ဗာဟိရာယတန' ခြောက်ပါးတို့၏ အမည်တည်း။ ရဟန်း ''အလယ်၌ နစ်မြုပ်ခြင်း'' ဟူသော ဤအမည်သည် နှစ်သက်စွဲမက်မှု 'နန္ဒီရာဂ'၏ အမည်တည်း။ ရဟန်း ''ကြည်းကုန်း၌ တင်မှု'' ဟူသော ဤအမည်သည် ငါဟူသော ထောင်လွှားသည့် 'မာန'၏ အမည်တည်း။
ရဟန်း ''လူတို့ဆယ်ယူမှု'' ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ရဟန်း ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် လူတို့ နှင့်ရောနှောသည် ဖြစ်၍ နေ၏၊ အတူတကွ နှစ်သက်မှုရှိ၏၊ အတူတကွ စိုးရိမ်မှုရှိ၏၊ လူတို့ချမ်းသာသည်ရှိသော် ချမ်းသာ၏၊ လူတို့ဆင်းရဲသည်ရှိသော် ဆင်းရဲ၏၊ ပြုဖွယ်ကိစ္စတို့ပေါ်ပေါက်လာကုန်သည်ရှိသော် မိမိသည်ပင် ထိုကိစ္စတို့ ၌ အားထုတ်ခြင်းသို့ရောက်၏။ ရဟန်း ဤသို့ဖြစ်မှုကို 'လူတို့ ဆယ်ယူမှု'ဟု ဆိုအပ်၏။
ရဟန်း ''နတ်တို့ဆယ်ယူမှု'' ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ရဟန်း ဤသာသနာတော်၌ အချို့ သောရဟန်းသည် ''ငါသည် ဤသီလအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဤခြိုးခြံမှုအကျင့်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဤအကျင့် မြတ်အားဖြင့်လည်းကောင်း ထင်ရှားသော နတ်သော်လည်းကောင်း၊ မထင်ရှားသောနတ်သော်လည်း ကောင်း ဖြစ်ရလိမ့်မည်''ဟု တစ်ခုခုသော နတ်အဖြစ်ကို တောင့်တ၍ အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံး၏။ ရဟန်း ဤသို့တောင့်တမှုကို 'နတ်တို့ဆယ်ယူမှု'ဟု ဆိုအပ်၏။
ရဟန်း ''ဝဲစုပ်မှု'' ဟူသော ဤအမည်သည် ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့ ၏ အမည်တည်း။
ရဟန်း ''အတွင်း၌ ပုပ်ဆွေးမှု'' ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ရဟန်း ဤသာသနာတော်၌ အချို့့သောရဟန်းသည် သီလမရှိ၊ ယုတ်ညံ့သော သဘောရှိ၏၊ မစင်ကြယ်သည် ဖြစ်၍ ယုံမှားအပ်သောအကျင့်ရှိ၏၊ ဖုံးလွှမ်းအပ်သော အမှုရှိ၏၊ ရဟန်း မဟုတ်ဘဲလျက် ရဟန်းဟု ဝန်ခံ၏၊ အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးသူ မဟုတ်ဘဲလျက် အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးသူဟု ဝန်ခံ၏၊ အတွင်းပုပ်၏၊ ကိလေသာဖြင့်စိုစွတ်၏၊ အမှိုက် သရိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ရဟန်း ဤသည်ကို 'အတွင်း၌ ပုပ်ဆွေးမှု'ဟု ဆိုအပ်၏။
ထိုအခါ နန္ဒမည်သော နွားကျောင်းသားသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အနီး၌ ရပ်လျက် ရှိ၏၊ ထိုအခါနန္ဒမည်သော နွားကျောင်းသားသည် မြတ်စွာဘုရားအား ဤစကားကို လျှောက်ထား၏ - ''အသျှင်ဘုရားတပည့်တော်သည် ဤမှာဘက်ကမ်းသို့ကပ်ရောက်သည် မဟုတ်ပါ၊ ထိုမှာဘက်ကမ်းသို့ လည်း ကပ်ရောက်သည် မဟုတ်ပါ၊ အလယ်၌လည်း နစ်မြုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ၊ ကြည်းကုန်း၌လည်း တင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ တပည့်တော်ကို လူတို့ လည်း ဆယ်ယူလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ၊ နတ်တို့ လည်း ဆယ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဝဲသည်လည်း စုပ်ယူနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ပါ၊ အတွင်း၌လည်း မပုပ်ဆွေးပါ၊ အသျှင်ဘုရားတပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရား၏ အထံ၌ ရှင်အဖြစ်ကို ရလိုပါ၏၊ ပဉ္စင်းအဖြစ်ကို ရလိုပါ၏''ဟုလျှောက် ထား၏။
နန္ဒ သို့ ဖြစ်လျှင် သင်သည် နွားရှင်တို့ အား နွားတို့ ကို အပ်ချေဦးလော့ဟု မိန့် တော်မူ၏။ မြတ်စွာဘုရား နွားမတို့ သည် နွားကလေးတို့ ကို ခင်တွယ်ကြသည်ဖြစ်၍ အလိုအလျောက် ပြန်သွားကြပါကုန်လတ္တံ့ ဟု လျှောက်၏။ နန္ဒ သင်သည် နွားရှင်တို့ အား နွားတို့ ကို အပ်ရမည်သာတည်းဟု မိန့် တော်မူ၏။
ထိုအခါ နန္ဒမည်သော နွားကျောင်းသားသည် နွားရှင်တို့ အား နွားတို့ ကို အပ်ခဲ့၍ မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ် ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားအား ''အသျှင်ဘုရား နွားရှင်တို့ အား နွားတို့ ကို အပ်ခဲ့ပါပြီ၊ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရား၏ အထံ၌ ရှင်အဖြစ်ကို ရလိုပါ၏၊ ပဉ္စင်းအဖြစ်ကို ရလိုပါ၏ ''ဟု ဤစကားကို လျှောက်၏။ နန္ဒမည်သော နွားကျောင်းသားသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အထံ၌ ရှင်အဖြစ်ကိုရလေ၏၊ ပဉ္စင်းအဖြစ်ကို ရလေ၏၊ အသျှင်နန္ဒသည် ပဉ္စင်းဖြစ်၍ မကြာမြင့်မီ တစ်ပါးတည်းဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ကပ်လျက်။ပ။ အသျှင် နန္ဒသည် ရဟန္တာတို့ တွင် တစ်ပါးအပါအဝင် ဖြစ်လေ၏။
သံယုတ္တနိကာယ် သဠာယတန၀ဂ္ဂသံယုတ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန်
လွန်ခဲ့သောရက်က အောက်ပါ အကြောင်းအရာကို ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေက ပြောပြပါသည်။ သူပြောသည့်အကြောင်းအရာများကို ကြားဘူးသော်လည်း သူ၏ပြောပြပုံကို နှစ်သက်သဘောကျသည့်အတွက် သူ၏ပြောပုံအတိုင်း ပြန်ပြောနိုင်ရန် အောက်တွင်ကြိုးစား၍ ရေးကြည့်ပါသည်။
အခါတစ်ပါးမှာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက မေးလျှောက်တယ်။ ဘယ်လိုမေးလျှောက်သလဲဆိုတော့...“ဒုက္ခခပ်သိမ်း ငြိမ်းတော်မူတဲ့ ရှင်တော်ဘုရားသည် ဘယ်ပုံဘယ်နည်းအားဖြင့် (ကာမောဃ၊ ဘဝေါဃ၊ ဒိဋ္ဌောဃ၊ အ၀ိဇ္ဇောဃ တည်းဟူသော) သြဃလေးသွယ် ရေပင်လယ်ကြီးကို ကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပါသလဲ” လို့မေးလျှောက်တယ်။ ဒီအခါမှာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားက “ငါသည် ရပ်တည်လဲမနေဘဲ၊ သွားဖို့ ရန်လည်း အားမထုတ်ဘဲ သြဃလေးသွယ် ရေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို ကူးမြောက်ခဲ့တယ်” လို့ ဖြေတယ်။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေကို တစ်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်က နားမလည်ဘူး။ ဒီလိုနားမလည်တော့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကို ထပ်ပြီးမေးတယ်။ “အရှင်ဘုရား... အရှင်ဘုရားသည် သြဃလေးပါးတည်းဟူသော ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို အဘယ်ကဲ့သို့ရပ်၍လည်း မနေဘဲ၊ သွားလည်း မသွားဘဲ ကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပါသလဲ” လို့ လျှောက်တယ်။ ဒီအခါမှာ မြတ်စွာဘုရားက ....“ရပ်နေတဲ့အခါ နစ်မြုပ်တယ်၊ သွားဖို့ ရန်အားထုတ်တဲ့အခါ မျောတယ်။ ငါဟာ...ရပ်လည်းမနေဘဲ သွားလည်းမသွားဘဲ သံသရာရေအယဉ်လို့ ဆိုအပ်တဲ့ သြဃလေးသွယ် သမုဒ်ပင်လယ်ကြီးကို ကူးမြောက်ခဲ့တယ်” လို့ဖြေတော်မူတယ်။
ဒီအခါမှာ မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က....“ရပ်လဲမနေဘဲ၊ သွားဖို့ ရန်လည်း အားမထုတ်ဘဲ သြဃလေးသွယ်လို့ဆိုရတဲ့ သံသရာ သမုဒ်ပြင်ကျယ်ကြီးကို ကူးမြောက်တော်မူခဲ့တဲ့ မြတ်စွာဘုရားကို အခုမှပင် ဖူးတွေ့ ရပေတယ်” လို့လျှောက်ထားပြီး ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားထံကနေ ထွက်ခွာသွားတယ်တဲ့။
ဒီမှာ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား မိန့် တော်မူတဲ့...“ငါဟာ ရပ်တည်မနေဘဲ” ဆိုတဲ့စကားက ကာမသုခလ္လိကနုယောဂဆိုတဲ့ ကာမဂုဏ်တွေထဲမှာ နေ နေတာ မဟုတ်ဖူး။ ကာမဂုဏ်တွေကို လိုက်စား၊ ခံစားနေခြင်းမဟုတ်ဖူးလို့ဆိုလိုတယ်။ “သွားဖို့ ရန်လဲ အားမထုတ်ဘဲ” ဆိုတာက အတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့ အကျင့်တွေကို ကျင့်ဆောင်အားထုတ်မှု မလုပ်ဖူးလို့ ဆိုလိုတယ်လို့အဋ္ဌကထာဆရာတွေက ဖွင့်ပြတတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့....ဒီတော့ “ရပ်နေတဲ့အခါနစ်မြုပ်တယ်” ဆိုတာ အဲဒီ ကာမဂုဏ်တွေကို ခံစားနှစ်သက်နေရင်....သံသရာ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာ နစ်မွန်းသွားမယ်၊ “သွားဖို့ အားထုတ်တဲ့အခါ....သွားပြန်တဲ့အခါ မျောပါတယ်” ဆိုတာက ဆိုခဲ့တဲ့ အတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့ မိမိကိုယ်ကို ညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်တွေကို ကျင့်ရင်....ဒါဟာလည်း သံသရာကလွတ်မြောက်ကြောင်း မဟုတ်ဘဲ သံသရာ သြဃရေတွေထဲ မျောပါသွားအုံးမှာဘဲလို့ဆိုလိုတယ်တဲ့။
ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဟာ ဆိုခဲ့တဲ့ ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂ နဲ့အတ္တကိလမထာနုယောဂဆိုတဲ့ အစွန်း(၂)ပါးနောက်မလိုက်ဘဲ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးလမ်းကို လိုက်ခဲ့တယ်။ “ဒါကြောင့် ငါဟာ မြုပ်လဲမမြုပ်ဘဲ မျောလဲမမျောဘဲနဲ့သြဃလေးသွယ် သမုဒ္ဒရာသံသရာပြင်ကျယ်ကြီးကို ကူးမြောက်ခဲ့တယ်” လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက မိန့် တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖွင့်ဆိုပြတာလည်း ရှိတယ်။
တချို့ ကတော့ အထက်က ဗုဒ္ဓစကားတွေဖြစ်တဲ့ “ရပ်တည်လည်း မနေဘဲ၊ သွားဖို့ လည်း အားမထုတ်ဘဲ သြဃသမုဒ္ဒရာကြီးကို ကူးမြောက်ခဲ့တယ်”ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်နဲ့“မြုပ်လည်းမမြုပ်ဘဲ၊ မျောလည်း မမျောဘဲ သံသရာပင်လည်ကြီးကို ကူးမြောက်ခဲ့တယ်”ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေဟာ ပို့ စ်မော်ဒန်အမြင် Post Modern Thought နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဖော်ပြချက်တွေဖြစ်တယ်တဲ့။ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမှာ ပို့ စ်မော်ဒန် အတွေးအမြင်တွေ ရှိတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် အဆောက်အအုံကိုဖြိုချပြီး အတွင်းက သဘာဝတ္တ၊ အတွင်းမှာ ၀ှက်ထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ထုတ်ကြည့်ရမယ်၊ ဒီကွန်စထရပ် Deconstruct လုပ်ကြည့်ရသလို ဗုဒ္ဓစာပေတွေကို လေ့လာတဲ့အခါ အပေါ်ယံ စာမျက်နှာ face value ထက် စာသား text ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ အနက်ဝှက်ကို ဖော်ထုတ်ဖို့ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ ဘယ်လိုဖော်ထုတ်ပြမယ် ဆိုတာတော့ ဆွေးနွေးကြည့်ရအုံးမှာပဲ။
တချို့ ကတော့... “ရပ်တည်နေတော့လည်း မြုပ်တယ်၊ သွားဖို့ ကြိုးစားတော့လည်း မျောတယ်...” ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ ယောဂအကျင့်နဲ့တက္ကဆိုတဲ့ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်။ ယောဂအကျင့် - ဒါမှမဟုတ် သမထအကျင့်ဆိုတာ ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံတစ်ခုခုအပေါ်မှာ တစ်စိုက်တည်းစိုက်နေအောင် ကျင့်ရတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ - မြေကြီးကသိုဏ်းအားထုတ်သူဟာ အဲဒီ မြေကြီးကသိုဏ်းပေါ်မှာပဲ စိတ်ကိုစူးစိုက်ထားရတယ်။ ဒီလို ကသိုဏ်းပေါ်မှာပဲ စူးစိုက်နေတာ၊ ကသိုဏ်းနိမိတ်မှတစ်ပါး အခြားဘယ်ကိုမှ စိတ်မသွားရအောင် အားထုတ်နေတာဟာ ‘ရပ်တည်’ နေတဲ့ သဘောပဲတဲ့၊ ဒီလို စိတ်ရပ်တည်ပြီး သမာဓိတရားတွေ ရရုံမျှနဲ့ တော့ ကိလေသာတွေကုန်တဲ့ လွတ်မြောက်ရေးတရား (မဂ်ဖိုလ်ဉာဏ်) တွေကို မရနိုင်သေးဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ချိန်ချိန်မှာ သံသရာဝဲသြဃကြီးထဲ နစ်မြုပ်နိုင်တာပဲ။
ပြီးတော့.... တက္ကဗေဒအစရှိတဲ့ တွေးတောဆင်ခြင်မှုနည်းတွေနဲ့ လည်း ရုပ်နာမ်တွေရဲ့အမှန်တရား ဒါမှမဟုတ် ရုပ်နာမ်တွေရဲ့ပရမတ္ထသဘာဝကို သိနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လောက်တွေးတွေး ပရမတ္ထသဘာဝ၊ ရုပ်နာမ်တွေရဲ့အနတ္တသဘာဝကို သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ တွေးနေသမျှတော့ စိတ်ဟာအတွေးတွေနဲ့ ပဲ လွင့်မျောနေမှာပဲ။ ဒီတော့ ‘မျော’ တယ်ဆိုတာ တွေးတောနေခြင်းဖြစ်တယ်။ အတွေးမျှ၊ ဆင်ခြင်မှုမျှဖြင့် ရုပ်နာမ်တွေရဲ့ပရမတ္ထသဘာဝကို မသိနိုင်တဲ့အတွက် မဂ်ဖိုလ်ဆိုတဲ့ ဉာဏ်ပညာကိုလည်း မရနိုင်ဘူး။ ဒီဉာဏ်တွေကို မရရင် ကိလေသာတွေကနေ မလွန်မြောက်နိုင်ဘူး။ မလွန်မြောက်ရင် သြဃလေးသွယ်ဆိုတဲ့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာ မျောနေအုံးမှာပဲ။ ဗုဒ္ဓကတော့ မြုပ်လည်း မမြုပ်ဘူး။ မျောလည်း မမျောပါဘူး။
ဘာပြုလို့မမြုပ်တာလဲဆိုတော့ ဗုဒ္ဓက မရပ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့် မမျောတာလဲဆိုတော့ ဗုဒ္ဓက သွားမှမသွားဘဲ။ မသွားတော့ မမျောဘူး။
ဒီမှာ....‘မရပ်ဘူး’ဆိုတာက....ခန္ဓာ(၅)ခုမှာ ဖြစ်သမျှ ဖြစ်လာသမျှကို ၀ိပဿနာမပြတ်ရှုမှတ်နေတာကို ဆိုလိုတာတဲ့။ ဖြစ်သမျှ ဖြစ်လာသမျှ ရှုမှတ်နေတဲ့အတွက် ရှုမှတ်သူဟာ ရပ်နေတာ၊ ငြိမ်နေတာ၊ စိုက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါဖြင့် ဖြစ်သမျှ....ဖြစ်လာသမျှကို လိုက်ပြီးရှုမှတ်နေခြင်းဟာ သွားနေတဲ့ သဘောမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ တကယ်က....မြင်တာကြားတာစတဲ့ ဖြစ်လာသမျှကို မြင်ရုံမျှ၊ ကြားရုံမျှတွင် ရပ်တည်အောင်ထားဖို့ဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာဆိုတော့ သွားနေတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ၀ိပဿနာရှုမှတ်နေခြင်းဟာ ရပ်နေတဲ့သဘော မဟုတ်ဘူး။
ခန္ဓာ ၅ ခု (ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ၀ိဉာဏ်)မှာ ဖြစ်လာသမျှကို ၀ိပဿနာရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာ မဂ္ဂင် ၅ ခု တစ်ပေါင်းတည်း အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်တဲ့။ (၁) သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ (၂) သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊ (၃) သမ္မာဝါယမ၊ (၄) သမ္မာသတိ၊ (၅) သမ္မာသမာဓိ ဆိုတဲ့ မဂ္ဂင် ၅ ခုကို အလုပ်သမားမဂ္ဂင် (ကာရကမဂ္ဂင်) လို့ တောင် အမည်ပေးထားတယ်။ ဒီမဂ္ဂင် ၅ ခုဟာ ၀ိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာ တကယ့်ကို အလုပ်လုပ်ရတဲ့ မဂ္ဂင်တွေဖြစ်နေလို့ ပဲတဲ့။ ဒီမဂ္ဂင် ၅ ခု ညီညွတ်စွာ အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင် ၀ိပဿနာရှုသူဟာ ခန္ဓာ ၅ ခုရဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကို သိနိုင်တယ်။ ရုပ်ဆိုတာဖြစ်ပြီး ပျက်နေတာ၊ ဝေဒနာဆိုတာ ခံစားပြီး ပျက်နေတာ၊ သညာဆိုတာ မှတ်သားပြီး ပျက်နေတာ၊ သင်္ခါရဆိုတာ စေ့ဆော်ပြီး ပျက်နေတာ၊ ၀ိဉာဏ်ဆိုတာ သိပြီးပျက်နေတာလို့မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်သိတယ်။ ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို ကိုးကားပြီး တချို့ ပညာရှင်တွေကတော့ ....ဆိုခဲ့တဲ့ မဂ္ဂင် ၅ ခု ညီညွတ်စွာဖြစ်ရင် ၀ီထိတစ်ခု ဆုံးပြီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပထမဆင်ခြင် ၀ီထိမှာ ၀ိပဿနာရှုမှတ်နိုင်ရင် ထိလာသမျှအာရုံတွေရဲ့ပျက်သွားမှု မမြဲမှုကို မှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြကြတယ်။ ဒီပထမဆင်ခြင်ဝီထိမှာ ၀ိပဿနာမရှုမှတ်နိုင်ရင်တော့ ဒြပ်ဝီထိ၊ အမည်ဝီထိတွေ ၀င်လာပြီဆိုတော့ ထိလာတဲ့ အာရုံရဲ့ပရမတ္တသဘောကို မသိနိုင်တော့ဘူး။ သူ့ အသိဟာ ပညတ်ကို သိတဲ့ အသိတွေပဲ ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ဖြော်ပကြတယ်။ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒြပ်ဝီထိတွေ အမည်ဝီထိတွေ မကျခင် ပထမဆင်ခြင်ဝီထိမှာ ၀ိပဿနာ တကယ်ရှုသိနိုင်ရင်တော့ ထိလာတိုင်းသော အာရုံတွေရဲ့ပျက်မှု၊ မမြဲမှုကို အမှန်အကန်သိတဲ့ ဉာဏ်အမြင်တွေဖြစ်တယ်။
၀ီထိတစ်ခုဆုံးတိုင်းဆုံးတိုင်း ၀ိပဿနာ မပြတ်ရှုမှတ်နေခြင်းဟာ ငြိမ်ပြီး“ရပ်”နေတာမဟုတ်ဘူး။ ရပ်နေတာမဟုတ်တဲ့အတွက် မမြုပ်ဘူး။ ပြီးတော့ ၀ိပဿနာ မပြတ်ရှုနေခြင်းဟာ တွေးတောဆင်ခြင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ အတွေးတွေနဲ့ ဆုံးစမရှိ “သွား”နေတာမဟုတ်ဘူး။ မသွားတဲ့အတွက် မမျောဘူးလို့ လည်း ဖွင့်ပြကြတယ်။ ၀ိပဿနာရှုမှတ်လို့နောက်ဆုံးမှာ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်ဖိုလ်ဉာဏ်တွေ ရသွားရင်တော့ သြဃလေးသွယ်ဆိုတဲ့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲ နစ်မြုပ်စရာလည်း မရှိတော့ဘူး။ မျောပါသွားစရာလည်း မရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားက... “ငါဟာ ရပ်တည်လည်း မနေဘဲနဲ့ ၊ သွားဖို့ လည်း အားမထုတ်ဘဲနဲ့သံသရာဆိုတဲ့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို ကူးမြောက်ခဲ့တယ်။ ရပ်ရင်မြုပ်တယ်။ သွားတော့ မျောတယ်။ ငါဟာ မြုပ်လည်း မမြုပ်ဘဲနဲ့ ၊ မျောလည်း မမျောဘဲနဲ့သြဃလေးသွယ်ဆိုတဲ့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကို ကူးမြောက်ခဲ့တယ်” လို့ပြောတာဖြစ်မယ်။ ဒီလို ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ပြောဆိုမိန့် ကြားတာကို လာပြီးမေးမြန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က.....
“သတ္တလောကကြီးမှာ.....ရပ်တည်မနေဘဲ၊ သွာဖို့ လည်း အားမထုတ်ဘဲ တဏှာကို ကူးမြောက်တော်မူပြီးသော မကောင်းမှုမှ အပပြုပြီးသော ငြိမ်းအေးတော်မူပြီးသော မြတ်စွာဘုရားကို ကြာမြင့်မှပင် ဖူးမြင်ရလေစွတကား” လို့လျှောက်ထားပြီးတော့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်တဲ့။
အထက်ပါအကြောင်းအရာများကို ပြောပြသော မိတ်ဆွေဖြစ်သူ၏ အိမ်မှ အပြန်တွင် မလှမ်းလျှောက်ဘဲနှင့် ရောက်သည့်အကြောင်းကို လွင့်လွင့်မျောမျော တွေးတောလာခဲ့မိပါသည်။ ။
ဓမ္မရိပ်မဂ္ဂဇင်း အတွဲ(၁) အမှတ်(၆)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:02 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, Nandar Thein Zan, သြဃတရဏသုတ်
မာန-ပယ်မှ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ် ( သို့ ) သြဃတရဏသုတ်
အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိမြို့ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်တွင် သီတင်သုံးနေစဉ် ညသန်းခေါင်ယံအချိန်ဝယ် ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါထွန်းလင်းတောက်ပလျက် နတ်သားတယောက်ရောက်လာကာ “မြတ်စွာဘုရားသည် အဘယ်သို့သော အကြောင်းခြင်းရာဖြင့် သံသရာ ၀ဲသြဃကို ကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပါသနည်း”- ဟုမေးလေ၏။
“ဒါယကာ နတ်သား -ငါဘုရားသည် ရပ်တည်မနေပဲ အားမထုတ်ပဲ သံသရာအယဉ် သြဃကို ကူးမြောက်ခဲ့သည်”
“ဘယ်လိုပါလဲဘုရား တပည့်တော် နားမလည်နိုင်ပါ၊ ထပ်မံ ရှင်းလင်းဟောတော်မူပါအုံး”
“ဒါယကာနတ်သား၊ ရပ်နေရင် နစ်မြုစ်သွားမယ်၊ အားထုတ်ရင်တော့ သြဃတွင် မျောပါသွားမယ် - ဤသို့လျင် ငါဘုရားသည် ရပ်တည်မနေပဲ အားမထုတ်ပဲ သံသရာအယဉ် သြဃကို ကူးမြောက်ခဲ့သည်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။
တရားဆုံးသောအခါ -- နတ်သားသည် -
“သတ္တလောက၌ ရပ်တည်မနေပဲ အားမထုတ်ပဲ သံသရာသြဃကို ကူးမြောက်တော်မူပြီးသော မကောင်းမှု့ အားလုံးကိုပယ်ခွာကာ ကိလေသာတို့မှငြိမ်းတော်မူပြီးသော ဘုရားရှင်ကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်မှ ဖူးမြင်ရလေစွတကား ”- ဂါထာစီကုံးကာ လျောက်ထားလေ၏။
ထိုစကားကို ဘုရားရှင်သည် ဆိတ်ဆိတ်လက်ခံတော်မူသောကြောင့် ငါ့စကားကို မြတ်စွာဘုရားလက်ခံပေတယ် - ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကာ ကွယ်ပျောက်သွားလေတော့၏။
သုတ္တန် အဖွင့်နှင့် အနှစ်ချုပ်များ
မြတ်စွာဘုရားသည် တရားဟောတော်မူသောအခါ အမြဲတမ်းချိုသာတော်မမူပဲ နာယူသူ အလိုအဇ္ဈာသယအလိုက် သင့်တော်သလို ဖြေတော်မူ၏၊ တခါတရံ ပြဿနာမေးမြန်းသူကို နှိပ်ကွပ်၍တမျိုး အထက်စီးမှ လွှမ်းမိုး၍တဖုံ အကြောင်းသင့်သည့်အတိုင်း ဖြေတော်မူခဲ့သည်၊ တရားဟောရာတွင် ရည်ရွယ်ချက်လည်း ကွဲပြားသေး ဟူ၏၊ အချို့နေရာတွင် တရားနာသူကို နှိပ်ကွပ်၍ ဟောခြင်းဟူသော နိဂ္ဂဟမုခဒေသနာ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ (တိတ္ထိ ပရဗိုဇ်တို့အား ဟောကြားခြင်းမျိုးဖြစ်သည်) အချို့နေရာတွင် စိတ်ဓာတ်တို့ တက်ကြွကြည်လင်လာအောင် ဟောကြားခြင်း ပဂ္ဂဟမုခဒေသနာ ဖြင့်လည်းကောင်း (စတင်ဖူးမြင်ရကတည်းက ကြည်ညိုရင်းစွဲ ရှိသူတို့အား ဟောကြားခြင်းမျိုး) အားဖြင့် ဟောတော်မူလေ့ရှိ၏။
နိဂ္ဂယှ နိဂ္ဂယှာဟံ အာနန္ဒ ၀က္ခာမိ၊ ပ၀ယှ ပ၀ယှ ၀က္ခာမိ၊ ယော သာရော သော ဋ္ဌဿတီ တိ၊( မ. နိ. ၃. ၁၉၆ )
“အာနန္ဒာ ငါဘုရားဟာ တရားတော်ကို နှိပ်ကွပ်ပြီးလဲ ဟောတော်မူတယ်၊ လွှမ်းမိုးပြီးလည်း ဟောတော်မူတယ်၊ တကယ်ဆိုတော့ သဒ္ဓါ သီလ ၀ီရိယ ပညာ စတဲ့ အနှစ်သာရ ရှိသူများဟာ တရားတော်ကို ထိုးထွင်းသိနိုင်ပေလိမ့်မယ်”- ဟု မဇ္ဈိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသ ပါဠိတော်တွင် ဖွင့်ပြထားသေး၏၊
အထက်ပါ မေးခွန်းမေးသော နတ်သားသည် အလွန်အကဲ မာနကြီးကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပညာရှိဟု မှတ်ထင်နေပြီး သူတပါးကို အထင်သေးတတ်၏၊ ငါသာလျင် အားလုံး သိပြီး တတ်ပြီးဖြစ်သည်ဟု ယူဆထားသတတ်။ သူ့ဘ၀အမှန်ကား ကဿပဘုရားရှင်လက်ထက်၌ တရားကျင့်ကြံကာ နတ်စည်းစိမ်ခံစားနေပြီး ယခုဂေါတမဘုရားရှင်ကို ဖူးရသောအခါ၌လည်း - လောကမှာ ငါသိပြီးသားတွေ အများကြီးပဲ၊ မသိသေးတာတွေက နည်းနည်းပဲ ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် မသိသေးတာတွေကို ဘုရားကို မေးမယ် ဆိုကာ လိုရင်းတိုရှင်းဖြင့် အကဲစမ်းကာ မေးမြန်းလေ၏၊
မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်း - “ဒီနတ်သားဟာ တော်တော်မာနကြီးတာပဲ၊ ညစ်ပတ်ပေကျံနေတဲ့ လက်သုတ်ပုဝါကို အရောင်ထပ်မံ ဆိုးရင်ဖြင့် ဘာမှ ထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ မာနကို မပယ်ဘဲနှင့် တရားထူး ရဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ အရင်ဦးဆုံး သူ့မာန ကျိုးသွားအောင် ဟောမှ ဖြစ်မယ် ” ဟု ဆိုကာ တိုတိုတုတ်တုတ် စကား နှစ်ခွန်းသာဖြေတော်မူပြီး အိုးရွဲ့ကို စလောင်းရွဲ့ဖြင့် ဖုံးသကဲ့သို့ ဖြေတော်မူ၏။
အဖြေကို နားမလည်နိုင်သော နတ်သားသည် ထိုအခါကျမှ မာနစိတ်ကို နှိမ်ချကာ အကျယ်ချဲ့ ဟောတော်မူပါအုံးဘုရား -ဟု လျောက်ထားလေရာ -
ဒါယကာနတ်သား လောကမှာ ကာမဂုဏ်ငါးပါးလို့ဆိုတဲ့ ကာမောဃ၊ ရူပဘ၀ အရူပဘ၀တွေမှာ တက်မက်တွယ်တာတတ်တဲ့ တဏှာဆိုတဲ့ ဘဝေါဃ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူ ၆၂ ပါးမှာ ကပ်ငြိ်နေတတ်တဲ့ ဒိဋ္ဌောဃ၊ သံသရာတလျောက် သစ္စာတရားကို မသိနိုင်ခြင်း မောဟဆိုတဲ့ အ၀ိဇ္ဇောဃ တရား ၄ ပါးရှိနေသမျှ သတ္တ၀ါတွေဟာ အပါယ်လေးပါးမှာ နစ်မြုပ်နေကြအုံးမှာပဲ - ဒီနေရာမှာတော့ ၃၁ ဘုံလုံးမှာ ရှိနေတဲ့ ကိလေသာအစုအပုံလို့ ဆိုရမယ့် သြဃတရားတွေထဲမှာ မကျင့်ကြံပဲ ရပ်နေရင် သံသရာမှာ နစ်မြုပ်နေအုံးမှာပဲ၊ ကြိုးစား အားထုတ်မယ် ဆိုရင်တော့ နိဗ္ဗာန်တဖက်ကမ်းကို ကူးမြောက်သွားနိုင်လိမ့်မယ်၊ ငါဘုရားသည် လွန်မြောက်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် အားမထုတ်တော့ဘူး၊ ဒီနည်းနဲ့ သံသရာ သြဃကို ကူးမြောက်ခဲ့ပါတယ် -
တရားတော်အဆုံးမှာတော့ နတ်သားဟာ သောတာပန် တည်သွားတာကြောင့် အထက်ပါ ဂါထာကို ရွတ်ဆိုကာ ပန်း နံ့သာ မျိုးစုံနဲ့ ပူဇော်ပြီး ပြန်သွားလေတော့၏။
M A ,P hD ( Research )
သဂါထာဝဂ္ဂ အဋ္ဌကထာ - ဋီကာ
မဇ္ဈိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသ ပါဠိတော်
“ဒါယကာနတ်သား ငါသည် ရပ်တည်မနေဘဲ အားမထုတ်ဘဲ သံသရာအယဉ် 'သြဃ'ကို ကူးမြောက်ခဲ့၏” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ''အသျှင်အသျှင်ဘုရားသည် အဘယ်သို့လျှင် ရပ်တည်မနေဘဲ အားမထုတ်ဘဲ သံသရာအယဉ် 'သြဃ'ကို ကူးမြောက်တော်မူခဲ့ပါသနည်း'' ဟု လျှောက်၏၊ “ဒါယကာနတ်သား ငါသည် အကြင်အခါ၌ ရပ်တည်နေ၏၊ ထိုအခါ နစ်မြုပ်ရ၏၊ အကြင်အခါ၌ အားထုတ်၏၊ ထိုအခါမျောပါ ရ၏၊
ဒါယကာနတ်သား ဤသို့လျှင် ငါသည် ရပ်တည်မနေဘဲ အားမထုတ်ဘဲ သံသရာအယဉ် 'သြဃ'ကို ကူးမြောက်ခဲ့၏” ဟု ဟောတော်မူ၏။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:50 AM0comments Links to this post